समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै कारण डा. सूर्यनारायण यादवको राजीनामा - Jhilko
समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै कारण डा. सूर्यनारायण यादवको राजीनामा
४ श्रावण,२०७६ 415 0
जनकपुर, २९ साउन । सप्तरी क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्यनारायण यादवको राजीनाको बिषयलाई लिएर यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस शुरु भएको छ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित डा. यादवले पार्टीलाई जानकारी नदिई संसद् सचिवालयमा किन राजीनामा पेस गरे ? यो सबैको चासो र अडकलबाजीको बिषय बनेको छ ।
कतिपयले तराई मधेशमा केही समय राज्यबिखण्डनको मुद्दा बोकेर संघर्ष गर्दै अहिले मूलधारको राजनीतिमा फर्केका डा. सिके राउतलाई संसदमा ल्याउने प्रयास स्वरुप डा. यादवले राजीनामा दिएको अड्कल काटिरहेका छन् भन्ने कतिपयले अस्वस्थ्यताका कारण राजीनामा दिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
एउटा निर्वाचित सांसदले एक्कासी राजीनामा दिएपछि यी र यस्ता अनेकौँ अडकलबाजी हुनु स्वाभाबिक नै हो । तर अन्य कारण भन्दा पनि आफ्नै समाजवादी पार्टी र पार्टी अध्यक्षप्रतिको बढ्दो असन्तुस्टिका कारण सांसद डा. यादवले राजीनामा दिएको हुन सक्ने धेरैको बुझाई छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख समक्ष सांसद डा. यादवले बुझाएको राजीनामापत्रमा आफू मधुमेहको बिरामी रहेको र अस्वस्थ्य भएका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको छ । उनको राजीनामा अस्वस्थ्यताका कारण नभई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रतिको असन्तुस्टिका कारण आएको सांसद डा. यादव निकट श्रोतको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष यादव र सांसद डा. यादवबीच करिब ५–६ महिनायता मनमुटाव देखिँदै आएको थियो । पार्टी अध्यक्ष यादव वर्तमान सरकारमा सहभागि भएपछि सांसद डा. यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्ने योजनामा थिए । तर अध्यक्ष यादवले डा. यादवलाई नभई अर्का चिकित्सक डा. सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएपछि उी असन्तुष्ट बनेको श्रोतको दावी छ । राज्यमन्त्री नबनाएपछि चिढिएका सांसद डा. यादव बिगत करिब एक बर्षदेखि संसद बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।
उनले पार्टीमा रहेर केही गर्न चाहन्थे, सांसद डा. यादव निकट एक नेताले भने‘ पार्टीले निर्देशन देओस र जिम्मेवारी देओस भन्ने उनको चाहना थियो । तर पार्टीले त्यस अनुसारको भूमिका उनलाई नदिएकाले बाध्य भएर राजीनामा दिएका हुन् ।’
ती कुराहरु अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पटक–पटक राखेपनि अध्यक्ष यादवले कहिल्यै पनि त्यसप्रति ध्यान नदिएका कारण नै उनको राजीनामा आएको ती नेताको गुनासो थियो ।
सांसद डा. यादवसँग अध्यक्ष यादवले कहिले पनि कुनै कुरामा सोधखोज नगरेकाले संसदीय दलको बैठकमा पनि उनी नबसेको करिब छ महिनाभन्दा बढी भइसकेको श्रोतले बताएको छ ।
एक्कासी सांसद पदबाट डा. यादवले राजीनामा दिएसँगै समाजवादी पार्टीका नेताहरुमा बढेको छटपटी र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सभामुखलाई डा. यादवको राजीनामा स्वीकृत नगर्न गरेको आग्रहले पनि उनको राजीनामा अन्य कारण भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक कारणले हो भन्ने पुस्टि हुन्छ ।
डा.यादवको राजीनामालाई लिएर हिजो मंगलबार बसेको समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा राजीनाबारे छलफल भएको र राजीनामा फिर्ता गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको पार्टी श्रोतको भनाई छ ।
समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले डा. यादवको राजीनामाबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको र यसबारे छलफल भईरहेको बताए ।
सांसद पदबाट राजीनामा दिएका डा. यादव नाम चलेका बालरोग बिशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । राजनीतिमा खासै सक्रिय नदेखिएका डा. यादव निर्वाचनमा एक्कासी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अशोक मण्डल (अमर) लाई पराजित गर्दै सांसदमा निर्वाचित भएका हुन् । यादवको राजीनामा स्वीकृत भएमा सप्तरी १ मा उपचुनाव हुने छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पूल भाँचियो, डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा
४ आश्विन,२०७६098
१ असार,२०७६0234
३ श्रावण,२०७६0275
नेपालका समिर श्रेष्ठले १२ औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपको पुरुष...